Harena an-kibon’ny tany-Lanja miakatra: hivondrona ho hery ireo Mpitrandraka eto Boeny mba tsy ho voambaka | Région Boeny
Anjaran’ireo Mpitrandraka harena an-kibon’ny tany eto amin’ny faritra Boeny indray ny zoma 30 septambra sy ny sabotsy 01 oktobra lasa teo no nandray ny atrik’asa atao hoe Lanja miakatra 2016 karakarain’ny Komitim-pirenen’ny Harena an-kibon’ny tany na CNM (Comité national des mines), taorian’I Betsiboka.
Tsiahivina fa ny ministera eo anivon’ny Fiadidina ny Repoblika, misahana ny Harena ankibon-tany sy ny Solitany miaraka amin’ny Komitim-pirenen’ny Harena an-kibon’ny tany no mikarakara ny Lanja miakatra, izay natao tao amin’ny tranom-pivoriana Bloc Administratif Mahajanga.
Ireo mpitrandraka Malagasy madinika sy ireo Ben’ny tanàna eto amin’ny faritra Boeny no nasaina tamin’izany. «Antsika ny tany, antsika ny vatosoa, antsika ny sandry miasa nefa indrisy tsy antsika ny vola ». Io no teny filamatra nentin’ireo mpikarakara ity Lanja miakatra 2016 ity, nanentana ireo mpandray anjara.
Anisany nanatrika ihany koa ireo Sampandraharam-panjakana voakasika mivantana amin’ny fitrandrahana ny harena an-kibon-tany, notarihin’ny Prefen’I Mahajanga sy ny Lehiben’ny faritra Boeny ary ireo lehiben’ny Distrika.
Hialana amin’ny zavatra tsy mety teo aloha, hiarovana ireo Malagasy mpitrandraka madinika ny harena an-kibon’ny tany amin’ny fanambakàna sy ny tsy fisondrotry ny farim-piainany ary amin’ny zara-vilana manjo azy ireo no anton’izao atrik’asa izao hoy ny fanazavan’ny tale iraisam-paritry ny Harena ankibon-tany eto Mahajanga, Atoa Ralidera Tsiry.
Anisan’ny antony miteraka izay fatiantoka izay hoy kosa ny filohan’ny CMN, Atoa Andriatsira Rakotoarisoa ny fahamaroan’ireo mpandraharaha vahiny manao am-pihi-mamba ny harena ankibon-tany malagasy, ka izy ireo indray no tonga mpanakarena malaky noho isika tompon-tany.
Lanja miakatra: fanatsaràna ny farim-piainan’ny mpitrandraka madinika sy loharanom-bola ifotony
Hitsinjo manokana ny fanatsaràna ny farim-piainan’ny mpitrandraka madinika sy ny kaomina araka izany no tena tanjon’ny Lanja miakatra. Ankilan’izay dia nampafantarina iretsy farany koa ny lalàna misy sy ny zo amanan-draikitr’izy ireo tsirairay ny mikasika ny fitantanana ny vola azo sy izay tokony hiditra ao amin’ny kitapom-bolam-panjakàna eny ifotony, ary ny lalàna mifehy ny fitrandrahana manoloana ny fiarovana ny tontolo iainana.
« … tsy tokony atao resaka ambony latabatra fotsiny izao atrik’asa izao fa tokony hampiarinareo avy hatrany araka ny tokony ho izy. Hoy ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar, tamin’ireo mpikarakara sy ny mpitrandraka. Mba hisitrahanareo mpitrandraka ifotony ara-drariny ny vidin-kasasaranareo, ary hisitrahan’ny Vondrombahoakam-paritra ihany koa ny tamberim-bidin’ny harena nivoaka tao aminy. Satria aza adino fa ny vola azo amin’izany ihany no anisany hanaovanay mpitondra ny fampandrosoana aty ifotony. »
Anisan’ny fanapahan-kevitra noraisin’ireo mpitrandraka nivory tao avy hatrany ny fampivondronana ny herin’izy ireo. Ka isa-kaomina dia hisy fikambanana iray na maromaro, ivondronan’ny olona zato isaky ny fikambanana ahitana olon-tsotra, mpitrandraka, mpitondra, mpandraharaha mba ho ara-drariny sy mangarahara ary ara-dalàna ny fitrandrahana ny harena an-kibon’ny tany eto amin’ny faritra.